Zvita December rekuzvarwa tanzanite, turquoise - Nyowani yekuvandudza 2021
Tanzanite, tekoizi uye zircon Ndiwo mabwe aZvita zvinoenderana neyese yekare neyemazuvano mazita edec rekuzvarwa. Dombo rakanakisa raDecember rekuberekwa dombo kana chishongo chomuhuro. Bhuu topazi zvakare dzimwe nguva inotaurwa sedombo rekuzvarwa dombo rebhuruu mavara.
Dombo rekuzvarwa ibwe rinosanganiswa nemwedzi wekuzvarwa waZvita. Tanzanite, tekoizi uye zircon. Dombo rakakosha raDecember matombo ekuberekwa emazuva ano mhete kana chishongo
Chii chinonzi raDecember dombo rekuzvarwa?
Dombo raZvita rinowanikwa kupi?
Chii chinonzi Zvishongo zvekuzvarwa zveDecember?
Ndekupi kwaungawana dombo rekuzvarwa raZvita?
Ndezvipi zviratidzo zveZodhiac zveDec mabwe ekuberekwa?
Mhanza yakanaka inotanga muna Zvita
Iyo bhuruu uye violet mavara akasiyana emaminerari zoisite ari Tanzanite Ndezve boka reepidote zvicherwa. Inongowanikwa mu Tanzania, munzvimbo diki kwazvo yemigodhi.
Turquoise opaque, yebhuruu kune yakasvibirira maminera ayo ari hydrated phosphate yemhangura nealuminium. Iyo isingawanzo uye yakakosha mumakadhi akajeka uye yakave yakakosheswa sedombo rinokosha uye dombo rekushongedza kwezviuru zvemakore nekuda kweiyo yakasarudzika hue.
Inotaridzwa sedumwa rerudo. Icho chiratidzo cherombo rakanaka uye kubudirira uye chinotendwa kuzorodza pfungwa uye kuchengetedza iye anozvibata kubva mukukuvara. Mhete dzeTurquoise, kunyanya, dzinofungidzirwa kubvisa mweya yakaipa.
Zircon - chicherwa, chiri zveboka nesosilicates. Yayo kemikari zita iri zirconium silicate. Zircon inoumba musilicate inonyungudika nehukuru hwakakura hwesimba remunda simba risingapindirane zvinhu.
Tanzanite inozivikanwa neiyo trichroism yakasimba yakasimba, ichioneka neimwe bhuruu, violet uye burgundy zvinoenderana nekristaro maitiro. Tanzanite inogona zvakare kuoneka zvakasiyana kana ichitariswa pasi pemamiriro akasiyana emwenje.
Turquoise, december mabwe ekuberekwa ebhuruu mavara kubva kuchena kusvika pahupfu bhuruu kusvika kumatenga bhuruu mavara, uye kubva kubhuruu rebhuruu kusvika kune yero yero. Iyo bhuruu inonzi inonzi idiochromatic mhangura nepo girini yacho ingave iri mhedzisiro yesimbi isina kuchena.
Zircon inowanikwa mune akawanda mavara, anosanganisira akatsvukuruka mashava, yero, girini, bhuruu, grey uye isina ruvara. Ruvara rwe zirconi dzimwe nguva runogona kuchinjwa nekupisa kwekupisa. Chete zircon yebhuruu ndiDec dombo rekuzvarwa. Chiedza chebhuruu chakajairika ndicho chakajairika, rima bhuruu zvakanyanya zvisingaite.
Wega anozivikanwa Tanzanite dhipoziti yekukosha kwekutengesa iri kuchamhembe kweTanzania.
Mhedzisiro huru tekoizi vari Iran uye USA. Mamwe masosi iChina, Bulgaria, Tibet, Afghanistan, Australia, India, Chile neTurkestan.
Zircon yebhuruu inobva kuCambodia.
Mazuva ano matombo ekuberekwa zvishongo zvinogadzirwa ne Tanzanite, tekoizi uye zircon. Ruvara rwebhuruu matombo anowirirana zvakakwana nemadhayamondi machena machena kana mabwe asina mavara. Isu tinotengesa Zvita mabwe ekuberekwa maringi mhete, zvishongo, mhete, mitsipa nezvimwe.
Pane zvakanaka Tanzanite, tekoizi uye zircon iri kutengeswa muchitoro chedu.
TanzaniteMumvuri wakadzika kwazvo, Indigo, unobatanidza iyo intuition yeiyo violet ray pamwe nekuvimba kweiyo yakachena bhuruu ray. Inounza huchenjeri, chokwadi, chiremerera uye kugona kwemweya. Dombo rekutonga uye hupenyu hwakareba, inokurudzira kufungidzira uye inogona kuguma nehungwaru hwakadzama ikashandiswa mushe.
Turquoise, dombo rekuzvarwa, rakagara riri mucherechedzo wehupfumi uye hupfumi mutsika dzekare, asi kunakidzwa nedombo iri rinokatyamadza harina kumbobvira rakasimba kupfuura nhasi. Hazvina basa kuti inowanikwa kupi, tekoizi inogara ichibatanidzwa neakasimba, hunhu hwakanaka sekuchena uye kupora.
Bhuruu zircon yakanzi inonatsa simba rerima. Yakave ichishandiswa sedumwa rekufamba kana rekudzivirirwa kubva kune zvakaipa munguva dzekare. Kana iwe uchinzwa kubatwa mune isina simba simba, bhuruu zircon inonzi inonatsa yako simba. Izvo zvinounzawo iwe kubudirira uye kukudzwa.
Sagittarius neCapricorn mabwe ese ari mabwe aDecember.
Chero zvaunenge uri Sagittarius naCapricorn. Tanzanite, tekoizi uye zircon ndiro dombo kubva Zvita 1 kusvika 31.
Chinese Zodiac: Rombo rakanaka rinotanga muna Zvita, mari iri kutenderera mukati.
Kune avo vari vengwe, muna Zvita, rombo rakanaka, hupfumi hukuru uye hupfumi hushoma huchauya pamwechete. Kana hupfumi hwakawanda hwachinja, hupfumi hwacho hunobuda, uye hupenyu huchaita sekurota
December 1 Sagittarius Tanzanite, tekoizi uye zircon
December 2 Sagittarius Tanzanite, tekoizi uye zircon
December 3 Sagittarius Tanzanite, tekoizi uye zircon
December 4 Sagittarius Tanzanite, tekoizi uye zircon
December 5 Sagittarius Tanzanite, tekoizi uye zircon
December 6 Sagittarius Tanzanite, tekoizi uye zircon
December 7 Sagittarius Tanzanite, tekoizi uye zircon
December 8 Sagittarius Tanzanite, tekoizi uye zircon
December 9 Sagittarius Tanzanite, tekoizi uye zircon
December 10 Sagittarius Tanzanite, tekoizi uye zircon
December 11 Sagittarius Tanzanite, tekoizi uye zircon
December 12 Sagittarius Tanzanite, tekoizi uye zircon
December 13 Sagittarius Tanzanite, tekoizi uye zircon
December 14 Sagittarius Tanzanite, tekoizi uye zircon
December 15 Sagittarius Tanzanite, tekoizi uye zircon
December 16 Sagittarius Tanzanite, tekoizi uye zircon
December 17 Sagittarius Tanzanite, tekoizi uye zircon
December 18 Sagittarius Tanzanite, tekoizi uye zircon
December 19 Sagittarius Tanzanite, tekoizi uye zircon
December 20 Sagittarius Tanzanite, tekoizi uye zircon
December 21 Sagittarius Tanzanite, tekoizi uye zircon
December 22 Capricorn Tanzanite, tekoizi uye zircon
December 23 Capricorn Tanzanite, tekoizi uye zircon
December 24 Capricorn Tanzanite, tekoizi uye zircon
December 25 Capricorn Tanzanite, tekoizi uye zircon
December 26 Capricorn Tanzanite, tekoizi uye zircon
December 27 Capricorn Tanzanite, tekoizi uye zircon
December 28 Capricorn Tanzanite, tekoizi uye zircon
December 29 Capricorn Tanzanite, tekoizi uye zircon
December 30 Capricorn Tanzanite, tekoizi uye zircon
December 31 Capricorn Tanzanite, tekoizi uye zircon
Natural Natural Zvita rekuzvarwa riri kutengeswa mune yedu gem shopu